Umbala - Ukuthunga Umugqa, Umsonto We-Embroidery - Ungbo MH Thread Co, Ltd.
I-MH ihlose ukunikeza amakhasimende ngemibala yezintambo zomhlaba wonke. Ukudweba kusuka emtatsheni wombala oqukethe ama-shades angaphezu kwe-10,000, amakhadi ombala we-Mh anikeza ukukhethwa kwe-shaNUMX shade, futhi i-Mh inikeza impendulo esheshayo yokukhiqizwa kombala wezinhla zokudayisa, okuhambisana nezidingo zakho zokuthunga.
Ukuze kusize ukuqhathanisa umehluko wembala, ochwepheshe bathuthukisa uhlelo lokukala umbala. Ukucacisa umbala ngamunye indawo ngombala wendawo, sikwazi ukusebenzisa inombolo yangempela ukukala umehluko phakathi kwemibala. Kunezinombolo eziningi zezikhala zombala ezitholakalayo.
Izinzuzo zokulinganisa umbala
Ngaphandle kokuguqula umbala wento into yenani langempela lokuhluka okungaqhathaniswa emkhatsini wembala, kuyasiza nokugcina ukuhambisana kombala, ukwenza lula ukufanisa umbala nokuxhumana kombala. Ukunikezwa komhlaba jikelele emakethe yemikhiqizo yokuthunga kudingeka ukwazi ukuxhumana okusheshayo nombala namafomula namazinga emhlabeni jikelele. Ngokulinganisa umbala, idatha enjalo ingathunyelwa ngokunembile ezindaweni ezidingekayo ngesikhathi esifanele.